Uni Yesti Thien ! | Knowledge & Fun Park
HomeLatestUni Yesti Thien !
November 1, 2017 Admin Latest, Nepali Literature, कथा 0
उनको साथीलाई मैले छेडेर कस्ती राम्री तिम्री साथी भनेर जिस्काए । नजिकै थिइन उनी लजाइन । गाजलु ती आँखाहरु मानौ मलाई हेर्न नै व्यस्त थिए म पनि तिनका नयनहरुमा भिज्न व्यस्त थिए । आज तिम्रो परिचय एकजना सँग गराउनु छ भनेर राजेशले लग्यो । मैले सोधे को हो भन न उसले हेर्न भेटे पछि आफै थाहा पाउछँस । मेरो मनले सोच्दै थियो कतै उही त होइन । के भनेर चिनाउने भयो अब यसले भनेर डरायो । उनीहरु तिनको नजिक गए भन्यो आभा उ मेरो साथी म अक्मक्क परे मलाई किन चिनाएको हो खै । आभा अब देखि उ पनि हाम्रो अफिसको एकाउन्टेन्ट केहि परे उसँग सहायता लिए है । म के गर्ने के नगर्ने मा परे । मैले पनि औपेचारिकता निभाउन बोले केहि शब्दहरु । राजेशले केहि थाहा पाए जस्तो मेरो मनको विचार र उसले हामीलाई बोल्ने वातावरण बनाएर गयो ।
म के बोल्ने भनेर सोच्न थाले तर उनी अघि भएपछि मैले मेरो मनको धेरै भावनाहरु उनी सामु पोखे । उनले पनि कति विचारहरुमा सहमती जनाइन । ज्यादै शिष्ट थिइन । म मनमनै धेरै हर्षीत थिए । एक्कासी राजेश आयो म तिर भन्यो बियर नलिएको मैले अह ! भने । म लिन्न सायद आभाले थाहा पाई । म उसँग उसको परिवारको बारेमा सोध्न्ा थाले वातावरण सहज बनाउनका लागि । नजिक रहनका लागिअपनत्वका लागि । हामी धेरै बेर बातचीत गरिरहयौ । यसै बीच राजेश आयो मलाई व्यंग्य हान्न थाल्यो र भन्यो थाहा छ आभा जी हाम्रो साथीलाई पनि मन मिल्ने साथी खोजी दिनुहोस् न आफु जस्तै राम्री । उनी अक्क न बक्क परि के भन्ने के नभन्ने । मैले हे राजेश के भनेको तिमीले । होइन आभा जी त्यस्तो केहि होइन भन्न थाल्यो । आखीर पोल खोल्यो राजेशले भनेर उ मनमनै भन्न थाल्यो । आभाले पनि सायद सहमती जनाएकी होला त्यसैले उ मख्ख परिरही । राजेशको कुरा सुनेर । त्यस रात पार्टी पछि म घर फर्के र उनी पनि ।
भाेलिपल्ट उनी अफिस आइनन । मनमा नरमाइलो लाग्यो । काम गरेपछि उनको घर तिर गए सरासर । उनी एक्लै बसीरहेकी थिइन् । म उनको ढोकामा जाँदा उनी छक्क परिन । सर यहाँ तिमी अफिस आइनौ किन रहेछ भनेर हेर्न आएको के भयो होइन केहि होइन मन लागेन अनि त्यसैले भन्दै उनी उठिन । सर बस्नुहोस् न ठिकै छ भनेर म उठॆ । केहि भए मलाई भन न त भनेर मैले भने खास केहि छैन भन्दै उनी म नजिक आई र भनी मलाई विवाह गर्नुहोस् न ।
म स्तब्ध भए म खबर गर्छु नी भनेर म उठे र त्यँहाबाट हिडे । जाने बेलामा उनले हात समाएर मलाई एक्लो नबनाउनु है भनि रुन थाली । मौनता छायो त्यसबेला तर मैले चाहेको जस्तो भयो त्यसबेला । म मख्ख भए । भोलिपल्ट अफिस गएर काम गर्दा मेरो प्रशन्नता देखेर राजेशले किन यस्तो हर्ष नि भन्यो । मैले भने मैले विवाह गर्न लागेनी । आभाले सुन्ने गरि भने । हो र को हो त्यो भाग्यमानी हँ मैले उत्तर मा भने छे एउटी परी मेरो सपनाको जीवनको । राजेशले ल पार्टी कसले दिने भन्न थाल्यो । मैले पार्टी नदिइ भएन । अफिसमा पार्टी दिए र सबैको अघि मैले आभालाई विवाह गर्ने प्रस्ताव राखे उनी छक्क परिन र सहमत भइन । हामी सबै प्रशन्न थियौ ।
त्यस पार्टी पछि केहि दिन राजेश अफिस आएन । किन रहेछ भनेर म उसको कोठामा गए । उ थिएन । कहाँ गएछ भनेर खोजे । रात भरी नै कोठामा आएन । डर लाग्यो कहाँ गयो भनेर । रात भर उसको कोठामा नै बसे । भोलिपल्ट अफिसमा आयो राजेश । हिजो कहाँ गएको तँ भनेर सोधे ए एक्लो भए भनेर हिडेको । कस्तो नमज्ज्ाा लाग्यो म थिए नि किन एक्लो भइस् तँ अब विवाह गर्ने मान्छेसँग के हिड्ने भनेर नि । उसले केहि कुरा लुकाइरहेको छ भन्ने लाग्यो मलाई । मैले सोधे उसले भनेन । मलाई शंका लाग्यो के आभा उसको प्रेमिका त होइन उसले राजेशलाई भन्यो त पनि विवाह गर न है राजेशले कोसँग भन्यो मैले भने आभासँग । उ झसङ भयो । कहाँ म विवाह गर्ने तैले मनपराएको केटी ।
मैले तेरो निम्ति यति गर्न सक्दिन न त तैलॆ मेरो लागि यति गरिस् मलाई पनि केहि गर्न दे न अब है मनभरी पीडा बोकेर मैले राजेशलाई आभाको जिम्मा लाए । आभा छक्क परिन र भनिन यो के गरेको तिमीले प्रश्न अनुरित्त नै रहयो मौनता छायो ।